Madaxwayne Kuxigeenka Ahna Kusii-simaha Madaxwaynaha DDSI Oo Kormeer Shaqo Kusoo Martay Dhismaha Maxjarka Xoolaha Una Kala Wareejisay Xilkii Hirgalinta Dhismaha 2 Shirkadood. - Cakaara News
Madaxwayne Kuxigeenka Ahna Kusii-simaha Madaxwaynaha DDSI Oo Kormeer Shaqo Kusoo Martay Dhismaha Maxjarka Xoolaha Una Kala Wareejisay Xilkii Hirgalinta Dhismaha 2 Shirkadood.
Jigjiga(CN) Khamiis.Maarso.26.2015, habsami u hirgalinta da’dajinta tayaysan ee mashaariicaha horumarinta DDSI waa halbeega cabrika horumarka ee xukuumada DDSI, waana hore u socodka hirgalinta horumarka in qorshaha la dajiyo ee mashaariicaha loo fuliyo sidii loogu tala galay xiligii loogu talagay oo cilmiyaysan.
Si loo dar dargaliyo dhamaystirka dhismaha xarunta macjarka xoolaha oo ku yaala tuulada hare oo ka tirsan degmada jigjiga ayaa waxay maanta madaxwayne ku xigeenka ahna ku sii simaha madaxwaynaha DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax ay booqasho shaqo ku tagtay maxjarkaasi.
Waxaana ku wehelinayay booqashadaasi maareeyaha wakaalada dhismaha iibka iyo adeega gaarka ah ee DDSI mudane Nasradiin Maxmaed Muxumed, ku xigeenka wakaalada nashqadaynta iyo daraasaadka DDSI mudane Axmed Haadi iyo masuuliyiin kasocday iyo masuuliyiin ka socday wasaarada beeraha ee heer faderaal.
Ka dib markii ay masuuliyiintan soo indha indheeyeen dhismaha xaruntani ayaa waxay xil wareejin ku sameeyeen shirkadii hore ee waday dhismaha xarunta oo ahayd shirkada Akiir construction loona wareejiyay in ay hirgaliso dhamaystirkeeda xaruntan wakaalada dhismaha iibka iyo adeega gaarka ah ee DDSI.
Xil wareejintaasi ka dib ayaa waxaa warbaahinta la hadashay madaxwayne ku xigeenka ahna ku simaha madaxwayne DDSI marwo sucaad ahmed faarax oo ka warbixisay ahmiyada uu leeyahay mashruucani, iyada oo tilmaantay in laga dareemay shirkadii hore gacanta ugu haysay dib u dhaca dhinaca takhtiga loo qabtay ah in ay ku dhamayso dhismaha xaruntan.
Ku sii simaha madaxwaynuhu iyada oo sii wadata hadalkeeda ayaa waxay si qoto dheer ugu nuux nuuxsatay ahmiyada uu leeyahay mashruucani in hore loo dhamaystiro si loogu fuliyo qorshayasha loogu talagalay oo qayb wayn ka qaadandoona hirgalinta horumarka waxayna wakaaladan la wareegtay ku boorisay in ay wakhtigaagan ku soo dhamaystiro dhismaha mashruucan.
Maareeyaha guud ee wakaalada dhismaha iibka iyo adeega gaarka ah ee DDSI mudane Nasradiin Maxamed Muxumed oo ka hadlay goobtii xilwareejinta ayaa si kooban uga warbixiyay in wakaalada qorshaheedu yahay dhamaystir deg deg ah oo tayo leh kuna dhamays tiridoonaan dhismaha xaruntan muda yar oo kooban.
Dhankiisa ku xigeenka wakaalada nashqadaynta iyo daraasaadka DDSI mudane Axmed Haadi wuxuuna sheegay in ay shirkadii hore gacanta ugu haysay dhismaha mashruucani la jaan qaadi kariwayday dadajinta dhismahan kana gaabisay wakhtigii loogu tala galay in ay ku soo gabagabeyso sidaasi darteedna xukuumadu u garatay in lagu wareejiyo wakaalada dhismaha iibka iyo adeega gaar ka ah ee DDSI oo looga bartay dhakhso u hirgalinta mashaariicaha waawayn ee deegaanka.
Isku soo wada xooriyoo shirkada akiir ayaa waxay gacanta ku haysay mashruucan dhismihiisa mudano 4 sano ah waxayna dhistay 20% ,halka ay wakaalada dhismaha iibka iyo adeega gaar ka ah ee DDSI ku soo gabagabayndoonto 80% mudo 8 bilood ah.